Wasiirka ammaanka ee Puntland oo ka hadlay dilalka qorshaysan, kana codsaday shacabka in lagala shaqeeyo nabadgalyada. – Radio Daljir
Wasiirka ammaanka ee Puntland oo ka hadlay dilalka qorshaysan, kana codsaday shacabka in lagala shaqeeyo nabadgalyada.
Garowe, Apr 23 – Wasiirka ammaanka ee dawladda Puntland Yuusuf Axmed Khayr ayaa sheegay in dilalka qorshaysan ee ka dhacaya Puntland ay yihiin aafo, ayna tahay in dadku ka waantoobo dhiigga xaaraanta ah ee ay daadinayaan.
Isagoo la hadlayey Barnaamijka Caawa iyo Daljir ayuu sheegay inay wax laga naxo tahay in qof islaam loo dilo aana qabiil ama micno darro, waxaana uu si gaar ah uga hadlay dilkii xalay ka dhacay magaalada Galkacyo uu sheegay in loo qabtay laba qof oo lagu tuhmay iyo sedex qof oo lagu dilay meel u dhaw magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Wasiirka ayaa ka codsaday shacabka reer Puntland inay la shaqeeyaan ciidanka bileyska si loo sugo nabadgalyada, taasi oo ah buu yiri tan kaliya ee nabadda lagu xaqiijin karo.